Ra’iisul Wasaare Cumar oo Khudbad ka jeediyey shirweynihii dalalka Islaamka ee Istanbul. – Gedo Times
Ra’iisul Wasaare Cumar oo Khudbad ka jeediyey shirweynihii dalalka Islaamka ee Istanbul.
17th April 2016 admin Wararka Maanta 4
Muqdisho, April 17, 2016….Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya Mudane Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke, ayaa magaalada Istanbuul ee dalka Turkiga uga qeyb galay shirweynihii dalalka Islaamka oo looga hadlayay kala qeyb sanaanta ka dhex jirta dunnida Islaamka, la dagaalanka kooxaha argagaxisada ah ee sida xun u adeegsanaya magaca Islaamka. waxana kulankan martigeliyey Madaxweynaha Jamhuuriyadda Turkiga Mudane Rajab Tayyib Erdogan.
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda oo khudbad dheer ka jeediyey shirka ayaa ugu horeyn uga mahad celiyey Jamhuuriyadda Turkiga ee marti gelisay shirkan dalalka Islaamka, wuxuuna ka waramay hormarrada ay ku talaabsatay Dawladda Soomaaliya oo taageerro ka heleysa shacabkeeda.
R.Wasaaraha ayaa ku dheeraaday muhiimadda ay leedahay in caalamka islaamku isku tiirsanaado, isagoo sidoo kale ka hadlay dhibaatada Argagixisada iyo sida loogu baahan yahay in wadajir loo wajaho, waxaana uu Alle ka baryey in dhammaanba dalalka Islaamka dhibaatada heysata uu ka dulqaado.
Ra’iisul Wasaare Cumar ayaa kulamo gooni gooni ah la qaatay madaxda dalalka Islaamka ee kasoo qeyb-galay shirka, waxana ay ka wada hadleen waxyaabihii ugu danbeeyey arrimaha Soomaaliya iyo xoojinta xiriirka dalalka Islaamka kala dhexeeya Soomaaliya.
Faahfaahin: Wafdiyo kala duwan oo gaaray magaalada Kismaayo iyo shirweyne ka furmay(Video+Sawirro)
Maqaal : Axmad Madoobe Iyo Cabdi Ileey Maxey iska Shabbahaan?